ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲများနှင့်အကြွေးတင်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလမ်းညွှန်ခြင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 31, 2014 Douglas Karr
သင်၏ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်သိပါသလား ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်လှည်းမြှင့်တင်ရေးပရိုမိုးရှင်း သို့ မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်သင်မူကားမတောင်းဆိုနိုင်၊ မတောင်းဆိုနိုင်ပါ သင့်စာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ? ဟေ့၊ သူတို့ပလက်ဖောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေပေါ့၊ ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်သက်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။ သင်သည်သူတို့၏အသုံးပြုသူများကိုရချင်လျှင်အချို့ကိုသင်သွားကြည့်ရပေမည် Facebook ကနေမြှင့်တင်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များ - နှင့်မှာရှေးရှေးမှာ က short Stack ထောက်ပြသောဤအတိုစုံ infographic ထားပြီ အကျင့်နှင့် Facebook အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၏ don'ts.
Facebook အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုပြုလုပ်ရမည် Facebook ကစာမျက်နှာ…သင်သိပါတယ်၊ အသုံးပြုသူတွေဆီကနေမြှင့်တင်တာကိုမပေးရင်သိမ်းထားတဲ့လျှို့ဝှက်ကိရိယာကြီးလား။ Doh! ဒါကမှန်တယ် ... သင်ဟာအတူတူ၊ အံ့အားသင့်ဖွယ်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုနှင့်အတူထွက်သွားတော့မည်ဟုမထင်ပါနှင့်၊ ၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ငွေသားအချို့အဆင်သင့်ရှိရန်သေချာစေပြီး၊
မြှင့်တင်မှုတွေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်တွေရနိုင်တဲ့လူမှုမီဒီယာမိတ်ဖက်တွေရှိတယ်၊ ၄ င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဝယ်ယူရေးကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်၍ သင်၏စီးပွားရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးများစွာကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ သင်၏ ၀ င်ရောက်သူ၏အီးမေးလိပ်စာကိုအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားရန်လိုပြီး၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်မှတ်သားခြင်းနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများစွာပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။
အိုး…ပြိုင်ပွဲတိုင်းမကျင်းပမီမတိုင်မီထိုလမ်းညွှန်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်။ အဆိုပါရှေးရှေးမှာ လူမှုရေးအရပုံ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများကသူတို့ရပ်ကြီးနှင့်ထောပတ်ကတည်းကဤအရာတို့ကိုအပေါ်တက်ထားပါ!
Tags: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲFacebook စာမျက်နှာပြိုင်ပွဲfacebook စာမျက်နှာလမ်းညွှန်ချက်များFacebook စာမျက်နှာပရိုမိုးရှင်းfacebook စာမျက်နှာစည်းမျဉ်းများဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာလှည်းစင်းfacebook မြှင့်တင်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များfacebook ပရိုမိုးရှင်းfacebook စည်းမျဉ်းများရေတိုလူမှုရေးအရ stacked